Gịnị bụ Backlinking? Otu esi emepụta ezigbo backlinks enweghị itinye ngalaba gị n'ihe ize ndụ | Martech Zone
Mgbe m nụrụ ka mmadụ kwuru okwu ahụ backlink dị ka akụkụ nke mkpokọta dijitalụ ahịa atụmatụ, M na-agbasaghị cringe. Aga m akọwa ihe kpatara site na post a mana achọrọ m ibido na akụkọ ụfọdụ.
N'otu oge, engines ọchụchọ na-abụbu akwụkwọ ndekọ aha buru ibu nke a rụrụ ma nye iwu dị ka akwụkwọ ndekọ aha. Algorithm Pagerank nke Google gbanwere odida obodo nke ọchụchọ n'ihi na o jiri njikọ gaa na ibe ebe a na-aga dịka ibu dị mkpa.
Njikọ nkịtị (arịlịka arịlịka) dị ka nke a:
Ka igwe nchọta na-achọgharị webụ wee weghara ebe ha na-aga, ha na-edepụta nsonaazụ njin ọchụchọ dabere na njikọ ole na-atụ aka ebe ahụ, kedu mkpụrụokwu ma ọ bụ nkebiokwu ndị ejiri na ederede arịlịka, lụrụ di na ọdịnaya edepụtara na ibe ebe aga. .
Ihe kpatara Backlinks ji dị mkpa
Dabere na Ibe mbụ Sage, ebe a bụ nkezi CTR site na ọnọdụ na ibe nsonaazụ ọchụchọ (SERP):
Ka anyị nye ihe atụ. Saịtị A na saịtị B na-asọ mpi maka ogo nchọta. Ọ bụrụ na saịtị A nwere njikọ 100 na-atụ aka na ya na isiokwu ahụ na ederede arịlịka backlink, na saịtị B nwere njikọ 50 na-atụ aka na ya, saịtị A ga-ebuli elu.
Igwe nchọta dị oke mkpa maka atụmatụ inweta ụlọ ọrụ ọ bụla. Ndị ọrụ ihe nchọta na-eji mkpụrụokwu na nkebiokwu na-egosi ebumnobi ha ime nyocha ịzụrụ ma ọ bụ ihe ngwọta… na ọkwa gị nwere mmetụta dị egwu na ọnụego pịa-site (CTR) nke ndị ọrụ search engine.
Dị ka ụlọ ọrụ ahụ hụrụ ngbanwe dị elu nke ndị ọrụ nchọ ihe organic… na ịdị mfe na-esote nke imepụta backlinks, ị ga-eche naanị ihe mere na-esote. Ụlọ ọrụ ijeri $5 gbawara na ọtụtụ ụlọ ọrụ SEO mepere ụlọ ahịa. Saịtị dị n'ịntanetị nke nyochara njikọ malitere akara ngalaba, na-enye ndị ọkachamara nchọnchọ ihe igodo iji chọpụta saịtị kacha mma maka njikọ iji nweta ndị ahịa ha ọkwa ka mma.
N'ihi ya, ụlọ ọrụ agbakwunyere njikọ-ewu atụmatụ iji mepụta backlinks ma kwalite ọkwa ha. Backlinking ghọrọ egwuregwu ọbara na izi ezi nke nsonaazụ ọchụchọ dara ka ụlọ ọrụ na-akwụ naanị maka backlinks. Ụfọdụ ụlọ ọrụ SEO mepụtara mmemme ọhụrụ njikọ ugbo na-enweghị uru ọ bụla kama ịgbanye backlinks maka ndị ahịa ha.
Algorithms Google na Backlinks dị elu
Hama dara ka Google wepụtara algọridim ka emechara algọridim iji mebie egwuregwu nke ogo site na mmepụta backlink. Ka oge na-aga, Google na-enwe ike ịchọpụta ụlọ ọrụ ndị na-emejọ ndị na-emejọ azụ azụ na ha lie ha na engines ọchụchọ. Otu ihe atụ nke ọha na eze bụ JC Penney, nke goro ụlọ ọrụ SEO nke bụ na-emepụta backlinks iji wuo ogo ya. Enwere puku kwuru puku ndị ọzọ mere ya na ejideghị ya, n'agbanyeghị.
Google nọ n'ọgụ na-aga n'ihu megide usoro a na-enweta n'ụzọ aka ike iji kwalite izi ezi nke nsonaazụ ọchụchọ. A na-agbakọ azụ azụ azụ ugbu a dabere na mkpa saịtị ahụ, ọnọdụ ebe ebe a na-aga, na ogo ngalaba n'ozuzu ya na mgbakwunye na nchịkọta isiokwu. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị banyere na Google, nsonaazụ ọchụchọ gị bụ ma mpaghara mpaghara yana omume ezubere iche maka akụkọ ihe nchọgharị gị.
Taa, imepụta ọtụtụ njikọ ndò na saịtị na-enweghị ikike nwere ike ugbu a mmebi ngalaba gị kama inyere ya aka. N'ụzọ dị mwute, a ka nwere ndị ọkachamara na-ahụ maka njikarịcha search engine na ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na backlinks dị ka ọgwụgwọ iji nweta ọkwa dị elu. Ọnwa ole na ole gara aga, emere m nyocha backlink maka onye ahịa ọrụ ụlọ nke na-agbasi mbọ ike ị nweta ọkwa… wee hụ ọtụtụ backlinks na-egbu egbu. Mgbe na-eke a disavow faịlụ na-ebugote ya na Google, anyị malitere ịhụ ọganihu dị egwu na ogo organic ha na okporo ụzọ jikọtara ya.
Taa, backlinking chọrọ nlezianya nyocha na nnukwu mbọ iji hụ na ị na-emepụta backlink nke ga-enyere aka ma ghara imerụ visibiliti ọchụchọ organic nke ika gị. Nke a animation sitere na 216digital na-akọwa atụmatụ ahụ:
Backlinks nwere ike ịnwe aha pụrụ iche (akara, ngwaahịa, ma ọ bụ mmadụ), ọnọdụ, na isiokwu metụtara ha (ma ọ bụ ngwakọta ya). Ngalaba na-ejikọta nwekwara ike ịba uru maka aha, ọnọdụ, ma ọ bụ isiokwu. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ nke dabeere na obodo na nke a maara nke ọma n'ime obodo ahụ (na backlinks), ị nwere ike ịkwado elu na obodo ahụ ma ọ bụghị ndị ọzọ. Ọ bụrụ na saịtị gị dabara na aha ika, n'ezie, ọ ga-abụ na ị ga-enweta ọkwa dị elu na mkpụrụokwu jikọtara ya na ika ahụ.
Ntụtu aka: N'ofe azụ azụ azụ
Ọ ga-abụrịrị backlink nke anụ ahụ ọzọ? ịma na-arị elu na ibu ha na search engine algọridim. Ntụtu aka bụ ịkpọ okwu pụrụ iche n'ime akụkọ ma ọ bụ ọbụna n'ime onyonyo ma ọ bụ vidiyo. Nkọwapụta bụ mmadụ, ebe, ma ọ bụ ihe pụrụ iche. Ọ bụrụ Martech Zone akpọtụrụ ya na ngalaba ọzọ na-enweghị njikọ, mana ihe gbara ya gburugburu bụ ahịa, gịnị kpatara na igwe nchọta agaghị atụba aha ahụ wee bulie ogo isiokwu ebe a? N'ezie ha ga-eme ya.
Enwekwara ọnọdụ nke ọdịnaya dị n'akụkụ njikọ ahụ. Ngalaba na-atụ aka na ngalaba ma ọ bụ adreesị webụ gị nwere mkpa na isiokwu ị chọrọ inye ọkwa? Ibe ahụ nwere backlink nke na-atụ aka na ngalaba ma ọ bụ adreesị webụ gị ọ dabara na isiokwu ahụ? Iji nyochaa nke a, engines ọchụchọ ga-ele anya karịa ederede na ederede arịlịka ma nyochaa ọdịnaya niile nke ibe na ikike nke ngalaba ahụ.
Afọ ole na ole gara aga, Google wepụtara akara nke nyere ndị ode akwụkwọ ohere kechie saịtị ndị ha dere na ọdịnaya ha mepụtara na aha ha na profaịlụ mmekọrịta ha. Nke a bụ ọganihu mara mma nke ukwuu n'ihi na ị nwere ike ịmepụta akụkọ ihe mere eme nke onye edemede wee tụọ ikike ha na isiokwu ndị akọwapụtara. Ịmegharị afọ iri m nke ide banyere ire ahịa, dịka ọmụmaatụ, agaghị ekwe omume.
N'ikwu eziokwu, enwere m obi ụtọ na njedebe nke oge ịkwụ ụgwọ na-egwu egwu ebe ụlọ ọrụ ndị nwere obere akpa na-akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ SEO nke nwere ọtụtụ ihe onwunwe iji mepụta backlinks. Ọ bụ ezie na anyị siri ike na-arụ ọrụ na-emepụta nnukwu saịtị na ọdịnaya dị egwu, anyị na-ekiri ka ọkwa anyị dara ka oge na-aga ma anyị tụfuru akụkụ dị ịrịba ama nke okporo ụzọ anyị.
M na-aga n'ihu na-agwa ndị mmadụ na SEO na-abụbu nsogbu mgbakọ na mwepụ, ma ugbu a ọ laghachiri na a nsogbu ndị mmadụ. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ntọala atụmatụ iji hụ na saịtị gị bụ search engine enyi na enyi, nke bụ eziokwu bụ na ọdịnaya dị ukwuu dị mma (na-abụghị igbochi engines ọchụchọ). A na-achọpụta ọdịnaya dị ukwuu ma kesaa ya na ọha mmadụ, wee kwuo ma jikọta ya site na saịtị ndị dị mkpa. Ma nke ahụ bụ anwansi backlink!
Atụmatụ azụ azụ taa
Atụmatụ azụ azụ azụ taa adịghị ka ndị ahụ afọ iri gara aga. Iji nweta backlinks, anyị irite ha taa nwere atụmatụ ebum n'obi nke ukwuu site na iji usoro ndị a:
Ngalaba Nchịkwa - Iji nyiwe dị ka Semrush, anyị nwere ike ịchọpụta mkpụrụokwu akọwapụtara ma nweta ndepụta saịtị saịtị ndị dị mkpa na ọkwa nke ọma. A na-akpọkarị nke a ikike ngalaba.
Ọdịnaya nke ala - Anyị na-emepụta ihe dị ịtụnanya, nke a nyochachara nke ọma, gụnyere infographics, nchọpụta mbụ, na / ma ọ bụ isiokwu edere nke ọma maka saịtị ebe a na-aga na-agụnye backlinks na saịtị anyị.
Nchọpụta - Anyị na-etinye usoro mmekọrịta ọha na eze iji ruo akwụkwọ ndị ahụ ma anyị na-akwalite ọdịnaya anyị ma ọ bụ rịọ ka anyị nyefee akụkọ na saịtị ha. Anyị na-akọwapụta ihe na-akpali anyị ime nke a na akwụkwọ ole na ole na-agọnarị backlink mgbe ha hụrụ àgwà nke akụkọ ma ọ bụ infographic anyị na-enye.
Backlinking ka bụ atụmatụ ị nwere ike ị nweta ya. Enwere ọrụ ụlọ njikọ tozuru oke nwere usoro siri ike yana njikwa mma gburugburu usoro mgbasa ozi na atụmatụ ha.
Ịkwụ ụgwọ maka backlink bụ mmebi nke Usoro ọrụ Google na ị gaghị etinye ngalaba gị n'ihe ize ndụ site n'ịkwụ ụgwọ maka backlink (ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ iji tinye backlink). Otú ọ dị, ịkwụ ụgwọ maka ọdịnaya na ọrụ mgbasa ozi iji rịọ backlink abụghị mmebi.
Ọrụ Nrụpụta Njikọ
Otu ụlọ ọrụ masịrị m bụ Stan Ventures. Ọnụ ahịa ha dị iche iche dabere na ogo ngalaba, akụkọ ahụ, yana ọnụ ọgụgụ njikọ jikọtara nke ịchọrọ inweta. Ị nwere ike ịrịọ ebe ị na-aga. Nke a bụ vidiyo nlele:
Stan Ventures na-enye ụdị mmemme atọ nke ụlọ ọrụ gị nwere ike ịmasị ha. Ha na-enyekwa akara ọcha na-ejikwa SEO ọrụ.
Njikọ Ụlọ Ọrụ Ọrụ mgbasa ozi Blogger Ọrụ SEO jisiri ike
Nke a infographic si Na blọọgụ Blast bụ ihe emelitere na nke ọma maka otu esi ewulite njikọ dị elu maka saịtị gị.
Tags: backlinkernjikọ azụbacklinking atụmatụbacklinksgaa blogger outreachikike ngalabainfographicnjikọ ụlọ infographicmmụtanjikọna blọgụ gbawaraije ozigbobacklinking outsourcedpeeji nke algorithmstan ventures